Shangri-La | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Shangri-La | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Raha tianao ny nofinofy sy ny angano dia mahafantatra izy ireo maka an-tany hafa any amin'ny tontolo hafa, tontolo madio saina. Toy izany ny glamor ity foana izay handresy ambony slots lalao. Shangri-La dia nilalao sy ny dimy reels, ary dimy ambin'ny folo paylines izay vola avy any ankavia miankavanana. The lalao ho ambony ny resahana ny angano tany ambanin'ny Himalayan lehibe tendrombohitra. Nisy tempoly lehibe sy tony renirano mikoriana manodidina azy mijery mahafinaritra. Azia tempoly fahiny ny mozika eo aoriana dia manolotra ny fanasitranana vokany teo amin'ny saina. Mba hametraka ny filokana, dia afaka misafidy avy 20p ny Max ny £ 200 isan-kofehy ireny.
Izany mahafinaritra sy maro loko foana izay handresy ambony slots lalao dia nanjary ny Manaraka Gen. Ny iray amin'ireo mpitarika eran-mpanamboatra Casino lalao an-tserasera. Manana fandresena loka maro slot lalao izay nanampy ny olona hahazo hijanona nampiantrano sy entana ny valisoa.
Ny fanehoana an'ohatra io foana izay handresy ambony slots lalao dia tigra fotsy, lota, Rhino, elefanta, sabatra sy ny tempoly. Ny tigra fotsy dia mariky ny karama ambony amin'ny 500 in-dimy ny tsatòka, rehefa miseho amin'ny karazany. Heart, Club, spade sy ny diamondra ny karatra fandoavana no kely indrindra marika. Izy ireo mijery soa tahaka ny vatosoa ary hampiadana indray ny reels manintona mijery. Misy marika fito tombony amin'ity lalao, telo ao amin'ny lalao, ary efatra lehibe ao amin'ny tombony haavon'ny. Izy ireo no zazavavy eo amin'ny sary rafitra, iray hafa ao amin'ny afo nandrehitra toetsika sy ny volamena vavaka kodiarana. Misy marika efatra Boribory somary lavalava endrika amin'ny fomba samy hafa azy ary mandritra ny tombony ihany no ahitana ambaratonga.
Wild Bonus: Ny ankizivavy eo amin'ny sary toe dia ny bibidia sy ny solon'ny fivavahana rehetra, afa-tsy ny kodiarana mariky. Hita ihany miraingiraingy azon'ny efatra, ary ny roa telo. Ankoatra, ny zazavavy ao amin'ny afo lit toetsika hita ho toy ny bibidia koa. Izany Manatsara ny mandresy ny tsikombakomba sy manampy anao handresy tsatòka tsara kokoa.
ampielezo Bonus: Ny vavaka volamena kodia dia aelezo endri-javatra io foana izay handresy ambony slots lalao. Telo na mihoatra izany famantarana fipetrahana mahatonga ny tombony haavon'ny. Misy lafin-javatra efatra, ary nomena tsapaka ianao na iray amin'izy ireo. Afaka mandresy na 8 na 12 spins amin'ny bibidia antoka landings na endri-javatra izay afaka handresy amin'ny tsato-kazo ny 15x ny 100x amin'ny Bet.
famintinana: Amin'ny tombontsoa isan-karazany sy ny manaitra sary, izany foana izay handresy ambony slots lalao no tsara indrindra ao amin'ny sokajy. Tsara vintana kely spins, dia afaka mora foana hahazo valisoa goavana tsatòkan'i.
Blackjack Suit en ny